Novonoin'i Google ny Kintana Google Analytics
Talata, Aprily 6, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Matt Chandler
Io fahatsapana milentika ao an-kibonao io dia mety avy amin'ny browser-nao. Aza mijery izao, fa mikasa ny hamoaka plugin iray fitetezana Google ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny tsy hanaraka azy… Google Analytics.
Google, mpamatsy fikarohana mitarika sy soavaly ao ambadiky ny fivezivezena malaza amin'ny tranokala Google Analytics Analytics Fitaovana, dia hamela ireo mpampiasa hisoroka ny fanarahan'ny fitaovany manokana.
Izany dia mitondra fanontaniana maromaro ary mety ho fiantraikany amin'ny webmaster sy mpivarotra tranonkala izay mampiasa Google Analytics hanarahana ny fivezivezena amin'ny tranokala, indrindra ny fiantraikan'ny fampiasana ny plugin amin'ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny fifamoivoizana an-tranonkala. Ity dia mametraka fanontaniana iray hafa mety ho lehibe kokoa: maninona no Google no manao izany nefa ny Google Analytics tsy manangona angon-drakitra manokana?
Ny zavatra farany farany, miankina amin'ny zavatra azo dinihina manokana angona Miisa ho anao manokana ve ny fampahalalana ISP sy ny toerana misy anao? Google Analytics dia tsy manangona adiresy IP isam-batan'olona, ​​midika izany fa ny fampahalalana rehetra soratana dia tsy mitonona anarana tanteraka.
Moa ve mametraka an'i Google ao amin'ny sokajy mpihatsaravelatsihy tanteraka satria izy ireo dia afaka mitahiry firaketana tsy misy fetra ny tantaran'ny fikarohana an'ny mpampiasa? Angamba. Ny tantaram-pikarohana dia mamela an'i Google hamoaka ireo valim-pikarohana manokana natao ho azy ireo, ary na dia nanamora kokoa aza izy ireo ny hiala tamin'io endri-javatra io tamin'ny azy ireo Privacy Center, tsy dia mivoaka an-tsehatra mihitsy izy ireo hanao dokambarotra momba an'io trangan-javatra io. Miresaka ihany koa fa nisy vondrona tsiambaratelo nangataka tamin'ny Federal Trade Commission manokatra fanadihadiana momba an'i Google Buzz, noho izany Google dia mety manindrona kely fotsiny eo amin'ny lafiny tsiambaratelo.
Ny tabataba dia efa voluminous sy avo profil, fa ny fihetsiko voalohany dia Ka? Firy amin'ny olona no mahalala fa manana ny Google Profile izy ireo, avelao ihany izy ireo afaka manitsy ity mombamomba azy ity ary manitsy ny toe-piainany manokana sy ny safidiny? Tsy afaka nitady haingana ireo data empirical aho, fa firy ny isan-jaton'ny mpampiasa tranonkala mampiasa ny plugin AdBlock Plus ho an'ny Firefox? Mety tsy dia tsara loatra ny mametraka azy ivelan'ny fihatahana mahazatra.
Ny tiako holazaina dia hoe ho an'ny webmaster sy mpivarotra dia mety hivarotra famandrihana bebe kokoa ity hetsika ity Omniture ary WebTrends satria isika ao ambadiky ny lambam-baravarana dia maniry ny fahazoana angona betsaka araka izay tratra. Saingy io fihetsika io dia mety ho fihetsiky ny lohalika manoloana ny olana mbola tsy – ary mety tsy hisy akory.
Tags: AnalyticsftcGoogle Analyticsomniturehiala Anaranapiraofilinamedia sosialy ankehitrinyventurepadwebtrends